अनुहारको छाला चाउरी किन पर्छ ? अनुहारको छाला चाउरी पर्न नदिन यसो गर्नुस् ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /Tips/अनुहारको छाला चाउरी किन पर्छ ? अनुहारको छाला चाउरी पर्न नदिन यसो गर्नुस् !
5,114 1 minute read
पाकेको केरालाई पेस्ट बनाएर अनुहारमा दल्नुहोस र आधा घन्टापछि मन तातो पानीले अनुहार धुदा अनुहारमा निखार आउनुका साथै चाउरी पर्नबाट जोगाउँछ । जुन पायो त्यही साबुनले मुख धुँदा अनुहारमा चाउरी पर्छ । तसर्थ राम्रो फेसवासले मुख धुनुपर्छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **